ရခိုင်နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ သတ်ဖြတ်၍ ရိုဟင်ဂျာ ၆၅၀ သေဆုံးကြောင်း ဦးထွန်းခင်မှ စွပ်စွဲ ~ Myanmar Express
From : ခိုင်မောင်ဦး (မလေး) လန်ဒန် အခြေစိုက် The Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင်မှ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပူးပေါင်း သတ်ဖြတ်တဲ့ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက် ဆူပူမူ အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ၆၅၀ သေဆုံးကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပါလီမန် မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆိုင်ရာ ပါတီ ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ လိမ်လည် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပါလီမန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆိုင်ရာ ပါတီ ပေါင်းစုံ ဥက္ကဌ Baroness Kinnock ရှေ့မှောက်မှာ ခုလို ဦးထွန်းခင်က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွာပေါင်း ၂၂ ရွာမီးရှို့ ခံရပြီး လူပေါင်း ၁၂၀၀ ပျောက်ဆုံးကာ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ လူပေါင်း ၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ လိမ်လည် တင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဦးထွန်းခင်က ဒီပြဿနာကို ဖြစ်ပွားအောင် အစိုးရတွင်းက တင်းမာသူတွေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီလို ဗြိတိန် ပါလီမန်မှာ ဦးထွန်းခင် လိမ်လည် ထွက်ဆိုနိုင်အောင် စီစဉ် ပေးသူကတော့ များမကြာမီက A friend’s appeal to Burma (မြန်မာနိုင်ငံသို့ မိတ်ဆွေတဦး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်) ကို ရေးသားသူ CSW မှ Benedict Rogers ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား နောက်ထပ် ကူညီ ပေးသူတွေကတော့ ရခိုင်စီမံကိန်း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ Burma Campaign UK တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူမှာ အစိုးရ စာရင်းအရ သေဆုံးသူ ၈၀ ကျော်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာ ရတဲ့သူက ၅၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကျေညာထားပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေထဲမှာလည်း ရခိုင်ဦးရေက တ၀က်ထက် ပိုများပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ကို နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေကလည်း လက်ခံထားပါတယ်။ အခုလို လူပေါင်း ၆၅၀ ထိ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ ဗြိတိန် ပါလီမန်ထိ တက်ရောက်ပြီး လိမ်လည်တာဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင်၊ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူကို ထပ်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံခြားကနေပြီး သွေးထိုးလုံဆော်နေတာနဲ့ တူတယ်လို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောက ပြောပါတယ်။ ခုလို အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ တင်ပြတာကို ဗြိတိန် ပါလီမန်က လက်ခံတာဟာလည်း အထူး ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ အခုအရေးအခင်းမှာ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဘဲ သေသေ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘဲ သေသေ အကုန်လုံးဟာ လူသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အတွက် ဒီလို သေကြေ ပျက်စီးမူကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက မလိုလားဘူးလို့ ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း)နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဦးဦးလှစောက ပြောပါတယ်။ အခု ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက် ဆူပူမူမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ လူမျိုး တစ်ခုတည်းသာ သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ကြတာ မဟုတ်ဘဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာကို တခွန်းတပါဒမှ မပြောဘဲ ဗြိတိန်ပါလီမန်မှာ တဖက်သတ် လိမ်လည် ပြောဆိုတာကတော့ ကိုယ်ချင်းစာမဲ့ရာ ရောက်ပြီး အထူး ၀မ်းနည်း စရာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဦးထွန်းခင်နဲ့ အပေါင်းအပါ တစ်စုရဲ့ လိမ်လည်တာကို ကမ္ဘာက သိအောင် ထပ်ဆင့်် ဖြန့်ဝေ ပေးတာကတော့ Burma Campaign UK ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဖြန့်ဝေတဲ့ စာကို အောက်မှာ ပူးတွဲ ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။ BROUK ADDRESSES BRITISH PARLIAMENT ON ARAKAN CRISIS The President of the Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), Tun Khin together with Benedict Rogers (East Asia Team Leader, Christian Solidarity Worldwide) and Chris Lewa (Co-co-ordinator for Arakan Project) presented evidence of the persecution of Rohingyas in Arakan State atameeting in the British Parliament today. The meeting was chaired by Baroness Kinnock, Chair of the All Party Parliamentary Group for Democracy in Burma, and focused on the current crisis in Arakan State, Burma. Tun Khin told the parliamentary meeting that the current crisis was well planned and organized by hardliners within the regime, who do not want to see reforms in Burma, and the Rakhine National Development Party (RNDP). In recent months, there have been an increasing number of anti-Rohingya activities, including seminars in Rangoon and in Arakan State organized by RNDP, and anti-Rohingya demonstrations. According to Tun Khin, at least 650 Rohingyas have been killed by Rakhine and government forces, and at least 1200 are missing. More than 80,000 Rohingyas are displaced, 22 villages have been burned down and 14 mosques destroyed. Bangladesh has refused entry to Rohingyas trying to flee the violence, and has pushed back at least 16 boats from Sittwe. The curfew imposed by President Thein Sein has only been applied to Rohingyas and not Rakhine..During curfew time Rohingyas stayed in their homes, while Rakhine and government authorities burned down Rohingya villages and looted Rohingya shops in Sittwe and Maungdaw. Tun Khin said: “We really need UN observers in Arakan State. Even though the riot was stopped some Rohingya houses are still being burned down by Rakhines, and in the last few days Rakhine police officers and Paramilitary Forces joined together and have been arresting Rohingya men, looting and raping Rohingya girls. We urge the British government to put effective pressure on the Burmese regime to stop the killings and violence against the Muslim Rohingyas in Arakan and to restore peace and security in the region, to allow the international community and NGOs to provide immediate humanitarian assistance to all the victims regardless of race or religion. We call for pressure on the regime to ensure that displaced Rohingya people can return to their original villages safely and freely. We call on the international community to urge the Bangladesh government to keep its border open to Rohingyas fleeing persecution and violence in Arakan. We also urge the Burmese government to restore our citizenship and ethnic rights, to stop anti-Muslim activities and racism in burma. There should be laws on racism if the regime want to see durable peace in Burma. There isasolution if the regime is willing to negotiate between the two communities.” For more information, please contact Tun Khin Tel; +447888714866 Myanmar Express
30 June 2012 10:52
၆၅၀ နည်းသေးတယ်၊ တစ်ယောက်မကျန် အကုန်သတ်ပစ် ကြဟေ့။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို စောက်ကုလားတွေ အကုန်ဝင်ရှုပ်နေတယ်။
30 June 2012 11:06
ဟိုသေနာ ခေါင်းပေါ်က ဟာက ဘာကြီးလဲ .. မြန်မာ့ ကျက်သရေ ခေါင်းပေါင်းတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးး.. ဘာကြီး တင်ထားတာလဲ ကျက်သရေ တုံးပါဘိ သနဲ့...
BBC and other pro Rohingya countries, Governments , Partys and OrganizationPro Muslim BBC and current UK government , UK Foreign Minister and VOA and UNHCR .World Rohingya , Saudi Arabia Government , Other Muslim country governments , World Muslim Organizations , World Muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) , VOA , World media , UN and NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders and all Rakhine people and Myanmar people in the World protest them. Arrest and prison Pro Rohingya Myanmar Muslims in Myanmar . Arrest and prison also pro Rohingya Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.Proest Pro Rohongya Media and Organizations WorldwideMuslims and Rohingya from London, UK and USA and World bribealot of money to Anna Jones , BBC , UK government , UK Foreign Secretary William Hague and VOA , RFA , DVB , UN , UNHCR , NGO that Rakhine state is Rohingya state. So All Rakhine and Myanmar people from London, other cities in UK and USA , World and NLD and Myanmar Government protest Anna Jones , BBC to demand apology from Anna Jones and BBC . Skame on you Anna Jones and BBC.All Rakhine and Myanmar ( Burmese ) people in Myanmar and World must protest in front of UN in New York, USA , UNHCR, NGO, Pro Rohingya and Muslim Partys, The Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) , Burma Campaign UK, Pro Rohingya and Muslim Organizations , Pro Rohingya Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro Muslim country Embassies and Consulates , Pro Muslim Organizations in Myanmar ( Burma ) and world about Rohingya.
၆၅၀ ဆိုတာနဲသေးတယ် အစပဲရှိသေးတယ် နောက်ဆိုရင် အမျိုးပါပြုတ်မှာ မပူနဲ့ ခင်ဗျားကိုပါ အင်္ဂလန်အထိ လာသတ်မယ်
မသတ်နဲ့ ။ သတ်ရင် တော့ တစ်ခါတည်း အပြီး သတ်။တို့ တိ၊ တို့ တိတော့ မလုပ်နဲ့ ဘင်္ဂါလီထွန်းခင် ကတော့ မကြာခင် သေချင်းဆိုးနဲ့ သေတော့မယ်
30 June 2012 21:19
HTOON KHIN,Fuck your mother's ass yourself 650 times.
1 July 2012 08:16
DVB ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ့ တာနဲ့ တင် သိပ်ရွံတာပဲ ထွီ
1 July 2012 14:42
Mother fucker Tun Khin.. All tun khin's relative in Myanmar are fucking by Rohinger..
ဟို သေ နာ ခေါင်း ပေါ် မှာ လီး ခွံ တင် ထား တာ လေ။
16 September 2012 20:14
On Al Jazerra,aBengali from RSO living in Saudi said 40,000 are killed. They all are liars.
[image: Photo: တောင်ကုတ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုဆန်းလွှင် ဓာတ်လိုက်သေဆုံး Sunday, May 26, 2013 တောင်ကုတ်မြို့မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟာင်း တစ်ဦး ဖြစ...
ဒေါ်စု အိမ်သို့ သွားရန် ငြင်း ဆန်ပြီး ဒေါ်စု အား ဟော်တယ် သို့ ခေါ်တွေ့ခဲ့သည့် ရှင်ဇိုအာဘေး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အိမ်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ် သွားရောက်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး သည် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ အိမ်တော်သို့သွားရောက်ကာ...
တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ တွင် အထပ်မြင့်မှ ခုန်ချ ကာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံး စီရင် သူကြောင့် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး သေဆုံး
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဘူဆန် တောင်ပိုင်းရှိ အသက် (၄၀) အရွယ်ရှိ Jang ဆိုသူသည် ၄င်းနေထိုင်ရာ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦး၏ ၁၀ လွှာမှ ခုန်ချကာ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ...
အမှိုက်မှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်းတွင် ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်သွားမည်
အမှိုက်မှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည့် စီမံကိန်းတွင် ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို သာ ရွေးချယ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကေ...
၆ ရက်မြောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ မူဆလင် အကြမ်းဖက်မှုများ
ဒီဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင် မေလ ၁၅ရက်နေ့မှာ ရဲ...